October 2019 – Media9
ဆယ်လီ ဖက်ရှင် အနုပညာ အလှအပ
October 29, 2019 media9Comment(0)
Unicode ဒါကတော့အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်အောင်တပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါအမြဲတမ်းကြီးအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပုံစံတစ်မျိုးထဲနဲ့အမြဲတမ်းမြင်နေရတာမကြိုက်ပါဘူး။ Zawgyi ဒါကေတာ့အေျပာင္းအလဲေလးျဖစ္ေအာင္တပ္ျဖစ္ခဲ့တာပါအျမဲတမ္းျကီးအတြက္လည္းမဟုတ္ပါဘူး။ကိုယ့္ကိုယ္ကိုပံုစံတစ္မ်ိဳးထဲနဲ႔အျမဲတမ္းျမင္ေနရတာမျကိဳက္ပါဘူး။
realme5|5Pro ထုတ်ကုန်သစ် မိတ်ဆက်ပွဲ
Unicode realme5|5Pro ထုတ်ကုန်သစ် မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က Lotte Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Zawgyi realme5|5Pro ထုတၠဳႏ္သစ္ မိတၦၾကၸဲ အခမ္းအနားကို ေအာကၱိဳဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က Lotte Hotel မြာက္င္းပ်ပဳလုပၡဲ့ပါတယ္။
October 25, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] “Sinon နေတဲ့ထိုင်တဲ့ပုံစံက အရမ်းရိုးစင်းတယ်။ Respect လည်းရှိတယ်။သူ့ပုံစံလေးကအရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်”လို့ဆိုတဲ့ ‘လူထဲကလူ’ ရုပ်ရှင်ကားကြီးရဲ့ ဒါရိုက်တာ’ကိုပေါက်’… [Zawgyi] “Sinon ေနတဲ့ထိုင္တဲ့ပံုစံက အရမ္းရုိးစင္းတယ္။ Respect လည္းရွိတယ္။သူ႔ပံုစံေလးကအရမ္းခ်စ္စရာေကာင္းတယ္”လို႔ဆိုတဲ့ ‘လူထဲကလူ’ ရုပ္ရွင္ကားၾကီးရဲ႕ ဒါရုိက္တာ’ကိုေပါက္’…
Redvolution Show ပွဲအတွက် ‘နီနီခင်ဇော်’ ရဲ့ရင်ခုန်သံတွေက…
[Unicode] “သီချင်းအားလုံးပေါင်း (၂၈) ပုဒ်ဆိုပါမယ်။ဆိုဖုူးသမျှတစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲက ဒီတစ်ခေါက်ဆိုမယ့် သီချင်းအပုဒ်ရေအများဆုံးပါပဲ” “နီနီ မန္တလေးမှာတစ်ခါမှတစ်ကိုယ်တော်ဖျော်ဖြေပွဲရှိုးပွဲမလုပ်ဖူးတဲ့အခါကျတော့ ရင်အရမ်းခုန်တယ်”… နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့ Mingalar Mandalay မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ့် Redvolution Show ပွဲအတွက် ‘နီနီခင်ဇော်’ ရဲ့ရင်ခုန်သံတွေက… [Zawgyi] “သီခ်င္းအားလံုးေပါင္း (၂၈) ပုဒ္ဆိုပါမယ္။ဆိုဖုူးသမွ်တစ္ကိုယ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲက ဒီတစ္ေခါက္ဆိုမယ့္ သီခ်င္းအပုဒ္ေရအမ်ားဆံုးပါပဲ။” “နီနီ မႏၱေလးမွာတစ္ခါမွတစ္ကိုယ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲရႈိးပြဲမလုပ္ဖူးတဲ့အခါက်ေတာ့ ရင္အရမ္းခုန္တယ္”… ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ Mingalar Mandalay မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမယ့္ Redvolution Show ပြဲအတြက္ ‘နီနီခင္ေဇာ္’ ရဲ႕ရင္ခုန္သံေတြက…
ပရိုဂျူဆာလုပ်ဖို့ပေမဲ့စီစဉ်ကြည့်တာအဆင်မပြေလို့လက်လျော့လိုက်တယ် ဆိုတဲ့ သက်မွန်မြင့်
[Unicode] အရင်ကတစ်လတစ်ကားရိုက်မယ်လို့စဉ်းစားထားပေမဲ့ ပျက်သွားတာကလည်းတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်ကောင်းသွားတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေကကျောင်းမတက်ခင်အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်တွေမှာမိဘနဲ့ပဲနေနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟောကာင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲတွေးလိုက်တယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်။ [Zawgyi] အရင္ကတစ္လတစ္ကားရိုက္မယ္လို့စဥ္းစားထားေပမဲ့ ပ်က္သြားတာကလည္းတစ္ဖက္ကျပန္ျကည့္ရင္ေကာင္းသြားတယ္ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ကေလးေတြကေက်ာင္းမတက္ခင္အိမ္မွာေနတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာမိဘနဲ႔ပဲေနႏိုင္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ဒါေဟာကာင္းဖို႔ျဖစ္လာတယ္လို႔ပဲေတြးလိုက္တယ္ေက်းဇူးလည္းတင္တယ္။
ဒရမ်မာကားကိုပိုကြိုက်တယ်။အရင်ကလည်းMRTV4မှာဒရမ်မာကားဘဲရိုက်နေကြဆိုတော့………. ဒရမ္မာကားကိုပိုျကိဳက္တယ္။အရင္ကလည္းMRTV4မွာဒရမ္မာကားဘဲရိုက္ေနျကဆိုေတာ့……….
Now & Ever အတွက်ရင်ခုန်နေတယ်ဆိုတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
[unicode] ဇာတ်လမ်းကတော့သုသုလည်းမကြည့်ရသေးဘူး Red Carpet နေ့ကြမှပဲအားလုံးနဲ့ကြည့်ရမှာဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်လည်းအရမ်းရင်ခုန်နေတယ်ဆိုတဲ့ပိုင်ဖြိုးသု [Zawgyi] ဇာတ္လမ္းကေတာ့သုသုလည္းမျကည့္ရေသးဘူး Red Carpet ေန႔ျကမွပဲအားလံုးနဲ႔ၾကည့္ရမွာဆိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္လည္းအရမ္းရင္ခုန္ေနတယ္ဆိုတဲ့ပိုင္ျဖိဳးသု
October 24, 2019 media9Comment(0)
[Unicode] “လူဆိုး၊သူခိုး၊ကြမ်းပိုးလုပ်ဖူးချင်တယ်။အမြဲတမ်းလိမ်လိမ်မာမာနဲ့ သားလေးအဖြစ်နဲ့ပဲနေနေရတဲ့အခါကျတော့ အဲ့ဒီလိုမျိုးရိုက်ဖူးချင်တယ်”လို့ဆိုတဲ့ ‘ရှင်မွေလ’… [Zawgyi] “အဓိကက ဖြန္ေၾကာင္တာအားနည္းတယ္”… “လူဆိုး၊သူခိုး၊ကြမ်းပိုးလုပ္ဖူးခ်င္တယ်။အျမဲတမ်းလိမ္လိမ္မာမာနဲ့ သားလေးအျဖစ္နဲ့ပဲေနေနရတဲ့အခါက်တော့ အဲ့ဒီလိုမိုးရိုက္ဖူးခ်င္တယ်”လို့ဆိုတဲ့ ‘ရွင်မြေလ’…
ဆယ်လီ ဗွီဒီယို ရုပ်ရှင် လူမှုဘဝ အနုပညာ အမေးအဖြေ
[Unicode] ကျွန်တော်ကိုငယ်ငယ်က ဗေဒင်ဆရာမကဟောထားတယ် ကျွန်တော်က လေးကြွင်းနှစ်ဆိုတော့ အချစ်ရေးမှာ အမြဲကျန်ရစ်ဖြစ်မှာပါ ‘ လို့ ထူးအောင်ရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ခဏတာ [Zawgyi] က်ြန္ေတာ္ကိုငယ္ငယ္က ေဗဒင္ဆရာမကေဟာထားတယ္ က်ြန္ေတာ္က ေလးျကြင္းနွစ္ဆိုေတာ့ အခ်စ္ေရးမွာ အျမဲက်န္ရစ္ျဖစ္မွာပါ ‘ လို့ထူးေအာင္ရဲ႕အခ်စ္ေရးနဲ ့ခဏတာ
[Unicode] အဓိကပြင်ဆင်ရတာတော့ အဝတ်အစားပိုင်းပေါ့နော်.. Producer တွေစီစဉ်တဲ့အတိုင်းတစ်ကားလုံးကိုအဲ့ဒီအဝတ်အစားတွေချည်း ဝတ်တယ်လို့ဆိုလာတဲ့ ချိုးရုပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ပက်သက်ပြီး ပြင်ဆင်ရတယ်လို့ပြောလာတဲ့ အိချောပို [Zawgyi] အဓိကျပင္ဆင္ရတာေတာ့ အ၀တ္အစားပိုင္းေပါ့ေနာ္.. Producer ေတြစီစဥ္တဲ့အတိုင္းတစ္ကားလံုးကိုအဲ့ဒီအ၀တ္အစားေတြခ်ည္း ၀တ္တယ္လို ့ဆိုလာတဲ့ ခ်ိဳးရုပ္ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျကီးနဲ ့ပက္သက္ျပီး ျပင္ဆင္ရတယ္လုိ႕ေျပာလာတဲ့ အိေခ်ာပို